Ibhetri yebhayisili yakho ayimfuneko, kwaye ngokuqhelekileyo icinga nje xa iphela. Kodwa nje inani elincinci lokunyamekela nokugcinwa kwintlawulo liya kunceda ukuqinisekisile ukuba akukuvumeli xa uswele kakhulu.
Isondlo siyimfuneko yonyaka. Ukungabikho kokunakekelwa kwebhetri kunye nokugcinwa kunye nokushisa kwemozulu kunendlela yokukhupha iibhetri ezisezantsi. Ufuna ukubamba ibhetri engalunganga ngaphambi kokuba ikuvumele, phantsi kwesinye seentsuku ezibandayo zonyaka.
Nangona kunjalo, ukuba ucinga nje ngebhetri yakho kanye ngonyaka, ukuwa kuya kuba yinto elungileyo yokuphuma ngaphandle kwaye uthabathe ibhetri yakho.
Ukuvavanya nokugcina ibhetri ibonakala kulula kwaye kufuna kuphela izixhobo ezimbalwa ezisisiseko.
Isaziso soKhuseleko esibalulekileyo
Ngaphambi kokuba wenze nantoni ngebhetri, kufuneka ugqoke ukukhusela kwamehlo kwaye ugcine nawaphi na amalangabi avulekileyo ngaphandle kwebhetri. Oku kubandakanya ugwayi kunye neminye imikhiqizo yokutshaya. Iibhetri zivelisa igesi ye-hydrogen enokutsha kakhulu. Iibhetri ziqulethe i-sulfuric acid ukuze i-glox latex iphakanyiswe ukuba igcine i-acidi yebhetri ekutshiseni izandla zakho.
Ukuba unayo ibhetri enganatywinwa, kucetyiswa kakhulu ukuba usebenzisa izinga lokushisa elifanelekileyo lokuhlawula i-hydrometer. Kukho iintlobo ezimbini eziphambili ze- hydrometer , ibhola elithongayo, kunye ne-gauge. Uhlobo lwegreyitha luba lula ukufunda kwaye alubandakanyi isidingo sokucacisa iibhola ezinemibala. Iibhetri ye-Battery iyakuthengwa kwiindawo zomoto okanye kwisitoreji sebhetri ngaphantsi kwama-20.00.
Ukuvavanya ibhetri etywinekileyo okanye ukujongana nokutshatyalazwa kwenkqubo okanye ugesi, uya kufuna i-voltmeter ye-digital nge-0.5% (okanye ngaphezulu). I-voltmeter yedijithali ingathengwa kwisitoreji se-elektroniki ngaphantsi kwama-$ 50.00. I-analog (uhlobo lweedalle) i-voltmeters ayilunganga ngokwaneleyo ukulinganisa i-millivolt eyahlukileyo ye-battery-state-of-charge okanye ukulinganisa imveliso yenkqubo yokutshaja.
Umhloli womthwalo webhethri unokhetho.
Khangela iingxaki ezicacileyo ezifana nokukhangela okanye ukuphulwa kwamanye amabhanti , amanqanaba e-electrolyte aphantsi, iipilisi ezingcolileyo okanye ezixhambileyo, iimbambo eziqhaqhaqhayo okanye ezikhukhulayo, izithuba ezixhambileyo zokuqhafaza okanye izithuba zebhethri, izixhobo zokubamba eziqhubekileyo, izixhobo zokukhupha ezikhuphakileyo, okanye ukuphazamiseka okanye ibhethri ewonakele. Lungisa okanye utshintshe izinto ezinjalo njengoko kufuneka. Amanzi adibeneyo kufuneka asetyenziswe ukuphakanyiswa kwinqanaba lombane webhethri.
Buyisela kwakhona iBhettery
Yenza kwakhona ibhetri kwi-100 yeepesenti ye-state-of-charge. Ukuba ibhetri enganatywinwa ine-.030 (ngamanye amaxesha iboniswa njengama-"amanqaku angama-30") okanye umahluko ophezulu ekufundeni ngokukhawuleza phakathi kwesona esona siphantsi nesona siphezulu, ngoko kufuneka ulinganise ibhetri usebenzisa iinkqubo zendlela yomenzi webhetri.
Susa i-Surface Charge
Intlawulo yomhlaba, ukuba ingasuswa, iya kwenza ibhetri ebuthakathaka ibonakale kakuhle okanye ibhetri ebonakalayo ibonakala ingalunganga. Susa umrhumo wendawo ngokuvumela ibhetri ukuba ihlale phakathi kweeyure ezine ukuya kweyeshumi elinambini kwigumbi elifudumeleyo.
Ukumisela isimo sengxelo yebhatri ye-batrothe ye-electrolyte e-80 F (26.7 C), sebenzisa le tafile elandelayo. Itafile zifumanisa ukuba i-1.265 i-gravity cell cell average and 12.65 VDC Vula i-Circuit Voltage yokufunda i-battery-acid acid.
Ukuba ukushisa kwe-electrolyte akuyona i-80 F (26.7 C), sebenzisa ithebula leMbuyekezo yokuHlaziya ukuHlaziya iVeki yeDivaysi evulekileyo okanye ukuFunda okuKhuseleyo.
Ukufundwa kombane okanye iVeki yeDivaysi eValiweyo Ukufundwa kwebhethri kwi-100 yeepesenti ye-state-of-charge iya kuhluka ngohlobo lwe-plate chemistry, ngoko jonga iinkcukacha zomenzi webhetri epheleleyo.
Itheyibhile yokuXhobisa kweHlabathi
Vula iVaneki zeeTeksi Okumalunga ne-State-of-Charge kwi-80 F (26.7 C) I-Hydrometer Umyinge we-Cell-Specific Gravity I-Electrolyte Freeze Point
12.65 100% 1.265 -77 F (-67 C)
12.45 75% 1.225 -35 F (-37 C)
12.24 50% 1.190 -10 F (-23 C)
12.06 25% 1.155 15 F (-9 C)
11.89 okanye ngaphantsi UKUQALA 1.120 okanye ngaphantsi 20 F (-7 C)
Kwiibhetri ezingabonakaliyo, khangela ubungakanani obukhulu kwisitya ngasinye nge-hydrometer kunye nokufunda kweeseli eziphakathi. Kwiibhetri ezitywinwe, zilinganise iVietector Circuit Voltage kwii-terminals zebhethri ene-digital voltmeter.
Le yodwa indlela onokuyigqiba ngayo i-state-of-charge. Ezinye iibhetri zinokwakhiwa kwe-"Eye Eye" ye-hydrometer, ebonisa kuphela ukulinganiswa kombuso kwenye yeeseli zayo ezintandathu. Ukuba isibonakaliso esakhelwe kuso sicacile, siluhlaza okwesibhakabhaka, okanye sibomvu, ngoko ibhetri inomgangatho ophantsi we-electrolyte kwaye ukuba ingafaki uphawu, kufuneka izaliswe kwaye ivuselelwe ngaphambi kokuqhubeka.
Ukuba uphawu, ibhetri ayimbi kwaye kufuneka ithathe indawo. Ukuba i-state-of-charge i-BELOW yeepesenti ezingama-75 esebenzisa uvavanyo oluvakalayo okanye uvavanyo lwamandla okanye i-hydrometer eyakhiweyo ibonisa "okubi" (ngokuqhelekileyo emnyama okanye emhlophe), ibhetri kufuneka ihlawulwe ngaphambi kokuba uqhubeke. Kufuneka ufake indawo yebhetri ukuba kukho enye okanye ngaphezulu kwezi zilandelayo:
Ukuba kukho .050 (ngamanye amaxesha kuboniswa njengama-"amanqaku angama-50") okanye umahluko ophezulu ekufundeni ngokukhawuleza phakathi kweseli esona siphezulu nesona siphezulu, unesitalathini okanye ubuthathaka. Ukusebenzisa inkqubo yokucetyiswa komenzi webhethri, ukusebenzisa i-Equalizing fee ingayilungisa le meko.
Ukuba ibhetri ayiyi kuphinda ihlawulele kuma-75 ekhulwini okanye ngaphezulu kwinqanaba le-state okanye ukuba i-hydrometer eyakhelweyo ingabonakali "into entle" (ngokuqhelekileyo eluhlaza okanye eluhlaza okwesibhakabhaka, ebonisa i-65 ekhulwini yokuhlawuliswa kweemeko okanye ngaphezulu ).
Ukuba i-voltmeter yedijithali ikhombisa ii-volts eziyi-0, kukho i-cell evulekile.
Ukuba i-voltmeter yedijithali ibonisa i-1045 ukuya ku-10.65 volts, mhlawumbi iseli elincinci. Isalathwana esincinci ibangelwa ngamacwecwe achukumisayo, i-sediment ("udaka") ukwakha okanye "ukusika" phakathi kwamacwecwe.
Umthwalo wokuvavanya iBhettery
Ukuba i-battery-state-of-charge inama-75 ekhulwini okanye ngaphezulu okanye inomfanekiso "olungileyo" owakhiwe kwi-hydrometer, ngoko unako ukuvavanya uvavanyo lwebhethri yemoto ngenye yeendlela ezilandelayo:
Ngomhloli womthwalo webhethri, sebenzisa umthwalo olinganayo nesigamu se-CCA ukulinganiswa kwebhethri imizuzwana eyi-15. (Indlela ekhuthazwayo).
Ngomhloli womthwalo webhethri, sebenzisa umthwalo olinganayo nesigamu sesigxina se-CCA imoto malunga nemizuzwana eyi-15.
Khubaza ukutshatyalaliswa kwaye uphendule injini ngaphezulu kwemizuzwana eyi-15 kunye ne-starter motor.
Ngethuba lokuvavanya umthwalo, i-voltage kwibhetri elungileyo ayiyi kuhlahla ngaphantsi kwetafile elandelayo eboniswe kwitheyibhile ye-electrolyte kumaqondo abonakalisiweyo:
I-Electrolyte Ukushisa F I-Electrolyte Temperature C Iqondo elincinane phantsi kwe-LOAD
100 ° 37.8 ° 9.9
90 ° 32.2 ° 9.8
80 ° 26.7 ° 9.7
70 ° 21.1 ° 9.6
60 ° 15.6 ° 9.5
50 ° 10.0 ° 9.4
40 ° 4.4 ° 9.3
30 ° -1.1 ° 9.1
20 ° -6.7 ° 8.9
10 ° -12.2 ° 8.7
0 ° -17.8 ° 8.5
Ukuba ibhetri ihlawuliswe ngokugcwele okanye inomfanekiso "olungileyo" owakhiwe kwi-hydrometer, ngoko unokuvavanya umthamo webhetri ejikelezayo ngokusebenzisa umthwalo owaziwayo nokulinganisa ixesha elithathayo ukukhupha ibhetri kude kube ngama-10.5 volts. Ngokuqhelekileyo umlinganiselo wokukhutshwa oza kukhupha ibhetri kwiiyure ezingama-20 unokusetyenziswa.
Umzekelo, ukuba unayo ibhetri engama-80 ye-ampere-hour, umlinganiselo wesilinganiso seemitha ezine uza kukhupha ibhetri malunga neeyure ezingama-20. Ezinye iibhetri ezintsha zingathatha ukuya kuma-50 ukuhlawulwa / ukukhutshwa "kweemeko" ngaphambi kokuba zifikelele kumandla abo. Kuxhomekeke kwisicelo sakho, iibhetri ezizaliswe ngokugcwele kunye neepesenti ezingama-80 okanye ngaphantsi kohlobo lwazo lwangaphambili oluluncedo olufumanekayo lubonwa njengolubi.
Bounce Back Uvavanye iBhettery
Ukuba ibhetri ayidlulanga uvavanyo lomthwalo, susa umthwalo, linda imizuzu elishumi, kwaye ulinganise i-state-of-charge.
Ukuba ibhetri iphinda ibuyele ngaphantsi kwama-75 ekhulwini kwi-state-of-charge (1.225 ubunzima okanye i-12.45 VDC), uze utshaye kwakhona ibhetri kunye novavanyo lomthwalo kwakhona. Ukuba ibhetri ihluleka ukuvavanya umthwalo okwesihlandlo sesibini okanye ibuyisela emuva ngaphantsi kwama-75 ekhulwini kwerhafu, yithatha indawo yebhetri ngenxa yokuba ayikho imfuneko yeCCA.
Ukuba ibhetri idlula ukuhlolwa komthwalo, kufuneka uyihlawule ngokukhawuleza kunokwenzeka ukukhusela isulfure kunye nokuyibuyisela ekusebenzeni kweyona nto.
Indlela yokutshintsha iiplogi zakho zeDeel
Ukufumanisa iingxaki zokuThumela ngokuZenzekelayo
Yintoni Eyona Nkoqobo Yolawulo Lwezandla Zemoto?
Isingeniso se-Auto Body Welding kunye nezixhobo
Ukususa i-Scriwed Scripped okanye engafanelekanga
Indlela yoQoqosho ngokuCwangcisa amaCom i-Car.
Inani lamaYuda abulawe ngexesha loKhuselwa kweSizwe
I-Mustang Gift Guide Guide
UFrank Furness, Umqambi weFiladelphia
Iirekhodi ezili-10 zeRiot-Grrrl
Adveria University Admissions
I-Acid Monoprotic Definition
Ukuhlaziywa kweMariner 19 I-Sailboat
Funda mfutshane 'IiPokcorn zePokcorn' zoTshintsho beBomi